Pogbaan gurraachummaa isaan arrabsoof saaxilame - BBC News Afaan Oromoo
Taphataan sarara gidduu Maanchester Yunaayitid Paawul Pogbaa erga rukkutaa peenaaliitii lakkoofsisuu dadhabee torban kana keessa gurraachummaa isaaf arrabsoof saaxilame jira.
Pogbaan taphattoota torban kana keessa miidiyaa hawwaasummaan arrabsoon gurraacha ta'uu buureffate irratti duulame keessaa sadaffaadha.
Taphataan lammii firansi umuriin isaa ganna 26 ta'e kun rukkutaa penaaliitii tapha yeroo boqonnaan booda argatan galchuu hin dandeenye.
Dargaggeesa Itoophiyaa Tiraampiin balaaleffataa jiru
Yeroo adabbii penaaliitii akkana argatanitti Maanchester Yunaayitidiifi Woolvis tokko walqixa turan.
Gaafa Dilbataa, taphataan sarara fuula duraa kilaba Riidiing Yaakuuw Meeyite, akkuma penaaliitiin inni rukute isa goolii eeguun qolatamteen arrabsoon sanyummaa karaa miidiyaa hawwaasummaan isa qaqqabe.
Torban darbe, Chelsiin ammoo "arrabsoo jibbisiisaa" sababii tapha Supper Kaappii Liiverpuul waliin taphatanirratti rukkutaa dhumaa Tammy Abraham dhaberratti isarra ga'aa turee balaaleffateera.
Leenjisaan Chelsii Frank Lampard arrabsoo taphataa lammii Ingilaand umuriin isaa ganna 21 ta'erra ga'e balaaleffachuun "fokkisaadha" jedheera. Taphattoonni arrabsoo sanyummaa kanaan irratti xiyyeefatamuun kun kampaaniiwwan miidiyaalee hawwaasummaan caalmaatti irratti hojjetamuu akka qabu yaada dhiyeesseera.
Deeggartoonni biroon ergaa arrabsoo tiwiiteraan gara Pogbaatti ergame yeroodhuma sana balaalefataniiru.
Ergaan tiwiiteraa hedduun booda kan haqaman yommuu ta'u akkawontoonni biroo baayyee ta'an ammoo achirraayyu kaafamaniiru.
Seerri itti fayyadama tiwiiteraa akkas jedha "amalawwan namoota jibbuudhaan ergaa dabarsan irratti tarkaanfii fudhadhu."
Adoolessa keessa, dhaabbanni tola-ooltummaa sanyummaa balaaleffatu 'Kick It Out' jedhamu gabaasa baaseen arrabsoon sanyummaa irratti xiyyeeffate bara dorgommii darbe 43% tiin dabaluu, himatni arrabsoowwan 274 ammoo galmaa'uu ibseera. Bara achi'aanu 192 ture.
Rukkutaa penaaliitii argatan kana itti fayyadamuu dhabuun Maanchester Yunaayitid manaajera kilabichaa Ole Gunnar Solskjaer irrattillee mormii kaasiseera.
Deggertoonni baayyeen carraan argame sun eenyu akka rukkutuu qabu of eeggannoon hin murtoofne jedhu.
Namoonni gariin Marcus Rashford kan tapha darbe irratti rukkutaa penaaliitii lakkoofsiseef kennamuu qaba jechaa turan.
Manaajerichi garuu Pogbaan kubbaa sirriitti rukkuteera garuu Rui Patricio akka isarratti hin lakkaawamneef dorkeera.
"Eenyu akka penaaliitii rukkutuu qabu kan murteessuu qaban taphattoota lamaanidha."
Jibba sababa sanyitiinii